Moxie မှ Spaces နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်စွာပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည် MarTech ဘလော့ဂ်
Moxie မှအကွာအဝေးများ - စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို align
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 25, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုများနေသောကမ္ဘာကြီးသည်မြန်ဆန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ Moxie အားဖြင့်နေရာများ စီးပွားရေးသမားများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းအတွင်းရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့များကိုချိန်ညှိသည့်ကိရိယာအသစ်များကိုအသစ်တင်ရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ အားလုံး align လုပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဝယ်ယူ, retention ကိုနှင့် upsell အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်ညှိနှိုင်း, ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Moxie ၏နေရာများသည်အဖွဲ့အစည်းကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အဖွဲ့များနှင့်နေရာများကို ဦး စွာထူထောင်ပြီးအောင်မြင်သောနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်စီးဆင်းမှုအတွက်လိုအပ်သည့်အခြားအရာများဖြစ်သောလှုပ်ရှားမှုစီးဆင်းမှုများ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ဆွေးနွေးခန်းဖိုရမ်များ၊ မီဒီယာ၊ စီမံကိန်းများ၊
Moxie ™မှနေရာများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ):
A tools တွေအပြည့်အဝ suite ကို Moxie ™မှကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဗဟုသုတ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အီးမေးလ်၊ စကားဝိုင်း၊ လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၊ လူမှုမီဒီယာ၊ cobrowse၊
ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုအသုံးပြုခြင်း အချိန်နှင့်အမျှထိုးထွင်းသိမြင်မှု.
၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုစွန့်ခွာခြင်းကိုလျှော့ချရန်၊ ဖောက်သည်များအားထိတွေ့ရန်နှင့်တက်ကြွသောကိရိယာများ နောက်ထပ်အွန်လိုင်းဝင်ငွေမောင်း.
အောင်မြင်စွာ execute မှ tools များ up-sell နှင့် Cross- ရောင်းအစီအစဉ်များ နှင့်အရေးကြီးသောဖောက်သည် data တွေကိုရဖို့။
စနစ်သို့ ၀ င်ရောက်သောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့အလုပ်လုပ်သောပြtoနာနှင့်သက်ဆိုင်သောကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရယူနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အဖြေများရှိသည့်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်လည်းသူတို့ရင်ဆိုင်ရသောပြproblemနာသို့မဟုတ်သူတို့လိုအပ်သောရှင်းလင်းချက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်၊ စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပူးပေါင်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုက်ရိုက်မြှင့်တင်ပေးသည်။ အသုံးပြုသူအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများများဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်။
မကြာသေးမီက Moxie သည် Email Spaces နှင့် Chat Spaces များကိုထည့်ခြင်းဖြင့် Spaces ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုစလုံးသည်တုန့်ပြန်မှု၏မြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များ၏အထောက်အပံ့ကိုကြီးမားစေသည်။ ဒါဟာအစပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
Email Spaces သည်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပြီးထိုဆက်သွယ်မှုများကိုပိုမိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Chat Spaces၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစုံပါ၊ အကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများကိုဖောက်သည်ချက်စကားဝိုင်းသို့တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်များကိုစွမ်းအားပေးသည်။
Social Media အသုံးပြုနည်း